Matupi Archives - Matupi Times Olthang
Matupi Times Olthang
Matupi January 17, 2020
Phanaeng Kho Ah Luem-Hnang Nah Asai Uh
2019-2020, Cueih thoem nah kum Pha Naeng tang rha (10) hil ka om Saengim (Yung) lam ka loh Saengim Saya/ma na, Saeng camoe na, Canglung dang ka cang camoe rhoek tah kho hnin thum khui…
NGO , (Ayone Oo) Ben Lam kaloh Sikcatue Ah Tueham Koi Acang Puei Uh
Traing (GH) yung lam ka loh vang (33) taeng ah Sikca ah ti mu tue ham along im cang nahasai pa uh. Matupi Khokhui kah aka om na lohatuek tih, a…
ရောင်စုံပန်း များ လန်း ရာ မြေ
ရေး အဘွန်းပါး – ဆို – Tuem Nga Hoih (၁) ရောင်စုံ ပန်း ဝေဆာ ဥယျဉ် တွေရဲ့ အလယ်၊ တူ စုံ ကျေး ငှက် တွေ ဝိုင်း ဖွဲ့ ကာ မြူး ကာ ပျော် ကြ တယ်၊ တောင်စဉ် စမ်း ရေ တွေ ဖြန့် ကာ ဝေ စီး…
Matupi January 16, 2020
ခု တော့ သိ လာ ပြီ
(၁) ခုတော့ လေ ကိုယ် တကယ် သိ ခဲ့ ပြီ ၊ ဟိုတစ်ချိန် က လျှောက် လှမ်း တဲ့ အမိုက် လမ်း မှာ ဒဏ်ရာ တွေ ကိုယ့် နှလုံး သား နှိပ် စက် နေ။ တွေး မိယင် ရင်နာ စရာ ဖြစ် ခဲ့ ပြီ မခြင်ခြင် ဘဲ လွန်းကျူး…
Matupi Peng Capae Neh Sing Yoe Committee Atuek Uh
December31, 2019; Matupi peng capae neh singyoe hepai ham la asoben kah ol paek bang la Matupi ah aka om khonu khopa boeih Matupi capae sing yoe neh Aung San Thuri Yah Bo Thaih Coeng…
Matupi January 15, 2020
ခငြျးတောငျဓလေ့အခွအေနအေရအမဲလိုကျခွငျးအတတျပညာဟာအမြိုးသားတိုငျး(လူကွီးလူငယျ)တတျအပျတဲ့ပညာတခုဖွဈပါတယျ။အမဲလိုကျခွငျးမှာယဘေုယအြားဖွင့ျ၂မြိုးတှေ့ရတယျ။၁)တဦးခငြျးအမဲလိုကျ(အမဲပဈ)ခွငျး၂)အုပျစုလိုကျ(အဖှဲ့အစညျးနဲ့)အမဲလိုကျခွငျး တို့ဖွဈပါတယျ။ အမဲလျုကျရာသီရောကျရငျအမဲလိုကျထှကျဖို့အမြိုးသား တိုငျးစိတျအားထကျသနျကွပါတယျ။ အထူးသဖွင့ျလူပြိုပေါကျစလူရှယျလေးတှဆေိုရငျအမဲလိုကျမှာပါဝငျဖို့ကိုယျရညျသှေးရပါတယျ။အမဲလိုကျခွငျးဖွင့ျမိမိအရညျအသှေးကိုပွသရသလို မိမိကိုယျကိုယုံ ကွညျမှုလဲပိုတကျစပေါတယျ။ အမဲလိုကျရာသီမရောကျမီ ပွငျဆငျစရာတ ှကေိုလဲကွိုတငျပွငျဆငျရပါတယျ။၁)အမဲလိုကျခြိနျမှာအဓိကလိုအပျတဲ့ယမျးအလုံအလောကျရှိထားဖို့လိုအပျပါတယျ။ ပှင့ျလငျးရာသီစတာနဲ့ယမျးစိမျး၊ယမျးကိုရဖို့ပွငျဆငျရတယျ။ယမျးတှဖေို၊ယမျးတှရေဖို့ယမးပငျတှခေုတျပွီးယမျးမီးသှေးလုပျ၊ယမျးမှုန့ျတှရေအောငျထောငျးရတယျ။ယမျးကောငျးရဖို့လုပျနညျးအဆင့ျဆင့ျလုပျဆောငျရပါတယျ။ လူကွီးတှကေ လညျးလုပျဆောငျနညျးအဆင့ျကိုလူငယျလူရှယျတှဆေီ တဆင့ျမြှဝသေ ငျပွပေးကွတယျ။ဒါကွောငျလူရှယျတှလေဲယမျးလုပျနညျးကိုတတျထားရပွီးအမဲလိုကျရာသီအမှီကွိုတငျပွငျဆငျထားရတယျ။ ၂)အမဲလိုကျရမဲ့နရောကိုရှေးခယြျခွငျးအမဲလိုကျရာသီစတငျတာနဲ့အမဲလိုကျအတှေ့ကွုံရင့ျကကြျပွီးကြှမျးကငြျသူမြားကအမဲလိုငျရမဲ့နရောကိုသင့ျတောျတဲ့အခြိနျအခါအလိုကျသတျမှတျလြာထားကွရပါတယျ။အမဲလိုကျရမဲ့နရောနဲ့တှရေနိုငျတဲ့အမဲကောငျဟာအမဲလိုကျကြှမျးကငြျသူမြားရဲ့ကြှမျးကငြျမှုပေါျမူတညျပါတယျ။သူတို့ရဲ့ကြှမျးကငြျမှုနဲ့ကွို တငျမှနျးဆလြာထားနိုငျမှုကအမဲရဖို့အခရာကလြှပါတယျ။ ၃)အမဲလိုကျဖို့တာဝနျပေး၊တာဝနျခှဲဝခွေငျးအမဲလိုကျရမဲ့ဒသေနရောအလိုကျ အမဲလိုကျမောငျးသူမြား၊အမဲပဈသူမြားကိုတာဝနျအသီးသီးခှဲဝပေေးကွတယျ။ကြှမျးကငြျမှုရှိပွီးအမဲလိုကျဦးဆောငျသူမှတာဝနျခှဲဝပေေးမှုကိုအလေးထားပွီးမိမိတာဝနျကြအေောငျအတတျနိုငျဆုံးလုပျဆောငျရပါတယျ။လူငယျလူရှယျမြားအနနေဲ့မြားသော အားဖွင့ျအမဲမောငျးသူမြားအဖွဈတာဝနျပေးကွတာမြားပွီးအမဲပဈသူမြားရဲ့ကြှမျးကငြျမှုနဲ့အတှေ့အကွုံ၊အမဲပဈခွငျးမှာအောငျမွငျမှုအလိုကျအမဲကောငျထှကျလာနိုငျတဲ့နရောမှာပထမဦးစားပေး၊ဒုတိယဦးစားပေးအစရှိသညျဖွင့ျသတျမှာနရောပေးကွတယျ။ အထူးပွောစရာရှိတာကအမဲရရှိဖို့ကအဓိကဖွဈတဲ့အတှကျဦးဆောငျသူရဲ့တာဝနျခှဲဝမှေုကိုတာဝနျကြကွေရတယျ။(အမဲလိုကျထှကျဖို့အဆငျသင့ျဖွဈပွီလား?(၂)ဆကျရေးခငြျသူမြားဆကျလကျရေးနိုငျပါတယျ)မှတျခကြျ။ Salai Salai Royal ရဲ့”အမဲလိုကျရာသီရောကျပွီ “post ကိုအမှီပွုထပျရေးခွငျးဖွဈပါတယျ။credit;Salia Ha Lwin
နိုင်ငံတကာမှ မတူပီသို့ငွေလွဲသည့် မိတ်ဆွေများသိစေလိုပါသည်။
လိုအပ်ချက်များ၁။ ငွေထုတ်မည့်သူနာမည်ဖြစ် တိုက်ရိုက်လွဲပေးပါ။၂။ ငွေထုတ်မည့်သူသည် နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် တပါတည်းယူလာပါ။၃။ ငွေထုတ်မည့်သူ မှတ်ပုံတင်မရှိပါကနိုင်ငံခြားမှ ငွေမလွဲခင် Netvilla ငွေလွဲကောင်တာတွင်အကူညီတောင်းပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ ၄။ မနက်ပိုင်းငွေလွဲပြေစာပြ ညနေ ပိုင်းထုတ်လို့ရပါသည်။၅။ ငွေထုတ်မည့်နေရာ NET VILLA HOTEL Hakha Road,Cang Bong Ward Matupi အားပေးကြသည့် မတူပီခရိုင်နေ ပြည်သူလူထုအားလုံးစိတ်၏ကျန်းမာခြင်း lကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်း များနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ။
Matupi January 14, 2020
Ai-Poeh Som Ah Thing Lam Tung Aling Uh
Janaury6, 2010; Matupui peng Hlatan kho Aipoeh Tlang kah thing lam tung ong nah poei tah mincang khonoek lung 10:00 lamkaloh atong uh.Teka akawn neh tukai tih Tanhlang mi ming phana ham la lungsuem tah…
Chin Barhan Tangka Mangpa Neh Matupi Peng NLD Members Rhoek Peng Ahil Uh
December 27, 2020; Matupi peng No.2,MP Pa Vui Kaw neh Matupi peng NLD EC rhoek tah Decrember 26, 2019 hnin atah Vangkai, Cangtak, Lung­pang, Lingtui ben ah mawtaw Longpuei daeng athen neh athen pawt te…
မြို့နယ်အဆင့် ပညာရေးစုံညီပွဲတော် မတူပီမြို့၌ကျင်းပ
မတူပီ ၊ ဇန်နဝါရီ – ၁၄ မတူပီမြို့ ဗိုလ်တိုက်ချွန်းအားကစားကွင်း၌ မြို့နယ်အဆင့် ပညာရေးစုံညီပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီအချိန်က ကျင်းပရာ မတူပီခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်အောင်ဆန်း ၊ မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာတာ၀န်ရှိသူများ နှင့် ပြိုင်ပွဲ၀င် အားကစားသမားများ က နိုင်ငံတော်အလံ အလေးပြုခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်၍ မြို့နယ်ပညာရေးမှူး ဦးတင်လွေးက ကျောင်းသား/သူ များ၏ ဗလငါးတန် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြိုင်ပွဲများကျင်းပပေးရခြင်း…
Matupi January 13, 2020
ရောင်စုံဖူးပွင့်လှပနေသော ချင်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာဝတ်စား ဆင်ယင်မှုဓလေ့များ
မငြးလပှည့ြ(ဟားခါး)ခငွြးပှညနြယသြညြ တိုငြးရငြးသားမွိုးနှယစြုပေါငြး ၅၃ မွိုးရှိသဖှင့ြ နရောဒသေ၊ ရာသီဥတု၊ မှမကွေနြှာပှငအြနအထေားမွားမှာလညြး ကှဲပှားလကွရြှိပါသညြ။ ပှညနြယတြဈခုလုံး တောငတြနြးကုနြးမှင့မြွား ဖုံးလှှမြးနသကေဲ့သို့ စာပေ၊ ဘာသာစကားမွားမှာလညြး မတူညီကှပေ။ ခငွြးပှညနြယြ၏ မှောကပြိုငြးတှငြ ဟားခါးမှို့၊ ဖလမြးမှို့၊ ထနတြလနမြှို့၊ တီးတိနမြှို့နှင့ြ တှနြးဇံမှို့တို့တညရြှိပှီး ခငွြးပှညနြယတြောငပြိုငြးတှငြ မငြးတပမြှို့၊ မတူပီမှို့၊ ကနပြကလြကမြှို့နှင့ြ ပလကဝြမှို့တို့ ရှိကှပါသညြ။ ခငွြးပှညနြယမြှောကပြိုငြးတှငြ မွားသောအားဖှင့ြ ကလေးမွား သုံးရကသြား ရှိလွှငြ ဆံရိတပြေးလေ့ရှိကှသညြ။ အသကအြရှယကြှီးလာသောအခါ မိနြးမ၊…
12… 35 »
“MATUPI AH MATU CAA MEYET LAE A CANG U EH?” (51,894)
Matupi olthang (40,361)
The Matupi Times olthang (36,928)
ညီ​ေလး မ​ေသမခ်င္​း မွတ္​ထား…. (33,036)
Tihnin hang ah online ah akalang bik ayuk (32,158)
Italian Industrial ung (30,904)
Kan Kaw Myo ah kum 70 atling nah Namtu Khohnin (CND) akang paa uh (28,320)
Duek olthang (22,080)
Donald Trump neh Kim Jong-Un Historical Summit ah senathuh rhoi (16,965)
VUANCI ABIBI ADUEM SAK (16,771)